Izikhangibavakashi Memmingen (eJalimane): incazelo kanye nezithombe
Germany - ezweni elinothile ezindaweni ezithakazelisayo. Yonke imizi lapha has ukubukeka yaso ehlukile enhle, lifanele ukuvakashelwa. Ukuziphilisa edorobheni elincani kusitjhijilo kweshumi eziningana mahle usuku uhambo, lawo lingelawo Memmingen sezindiza okuyinto ekahle kakhulu. Kusuka lapha ungaqala uhambo emangalisayo ngokusebenzisa eBavaria. Kodwa ezinsukwini ezingu-1-2 nakanjani kudingeka uhlale lapha. Memmingen ezikhangayo bayabuka nasemkhathini muzi benobungane futhi enhle, mhlawumbe, a izivakashi futhi ungafuni ukwenza okungaphezu kwalokhu.
Ngo-ntshonalanga Bavarian isifunda esiphethe Swabia itholakala, nenhloko-dolobha yalo iwukuba Memmingen (eJalimane) - idolobha elincane elinabantu abantu kancane ezingaphezu kuka-40 eziyinkulungwane. Lesi sivumelwano itholakala elaliphansi kwamagquma Alps futhi uvumelane ngokuvumelanayo ku landscape wendawo. Impumuzo komuzi, naphezu budebuduze ezintabeni, flat, indawo yokuhlala inohlelo rivulet encane Shtadtbah. Umfula, nakuba amancane, kodwa kungenye into ehluke evamile trout kwakhahlela. Lo muzi ubizwa ahlelwe minyaka yonke iholide elikhulu - Usuku umdobi, uma ababambiqhaza ncintisana ukubamba izinhlanzi. usayizi idolobha - 70 square metres. km, kodwa abahlala engxenyeni ephakathi ye isithakazelo izivakashi, ingasaphathwa. Zonke izindawo ezithakazelisayo kungenzeka ukuhlola ngosuku olulodwa.
Memmingen itholakala endaweni entabeni sezulu yezwekazi. Lapha, ngezinye izikhathi ngisho elishisayo nobusika ngokulinganisela abandayo. Lesi sifunda siyindawo yokuthi uwe ngempela eziningi imvula, 900 mm ngonyaka. Kwezulu aphansi kwenzeka ngo-February, futhi ngenyanga rainiest - Juni. Ngakho-ke, abahambi kufanele uhlale nawe izingubo sezulu esibi. Isilinganiso lokushisa laminyaka yonke kuwubufakazi 7.5 degrees Celsius. Ehlobo, isilinganiso thermometer uyabaselwa kuya degree 17 futhi ebusika lisiphathele ushushiso uphawu lokususa 3-5 degrees. ikhava Snow esiqhutshwa isikhathi esifushane, okuyisilinganiso sabangu-amasonto amabili ngonyaka.
Swabia District lethiwa yokudumisa okhuluma isiJalimane ekhethekile, lwesigodi Swabian ka-German. E Swabia futhi Memmingen ngemuva yaba nomlando omude ezithakazelisayo. Ngekhulu lesihlanu, idolobha lesimanje izizwe Alamanni wahlala.
Ngokokuqala ngqá igama lalo muzi sashiwo inkontileka ka umnikelo 1128, esishoyo ukuthi izwe Memmingen kuthiwa pha Oksenhauzenskomu sezindela. Idolobhana basungula, lapho liqala kudlule usawoti bomkhankaso okubi okwakugcwele eMbusweni WaseRoma. Memmingen e imibhalo futhi wabhekisela njengoba yokupaka ngendlela abadayisi usawoti abahamba besuka eJalimane e-Italy. indawo okuhle okunjalo nomthelela ekuthuthukiseni okusheshayo nokunonophala komnikazi. Ngo 1438 edolobheni wathola isimo idolobha khulula okubi okwakugcwele eMbusweni WaseRoma.
Emuva ngo-1506, Memmingen abathengisi ayenamandla okukwenza ukuhlomisa ngomkhumbi wakhe uhambo phesheya ngenhloso uthenga izimpahla kwamanye amazwe. Izakhamuzi zedolobha iza imizimba eminingi elawula ezingxenyeni ezikude zombuso. Ngo 1522 Memmingen wathatha ukuhlanganyela ngenkuthalo kuqala inkathi yeziNguquko esontweni, futhi abe esehlanganyela naye amaProthestani. Ngo-1525 kwaba khona inhliziyo wokuqala eYurophu yokutholwa bill amalungelo yomuntu, okubizwa ngokuthi iqoqo "Izihloko Nambili".
Ekhulwini le-17, idolobha kuyehla, kancane kancane yalahlekelwa ingcebo yayo, futhi 1803, ngemva kokuhlaselwa yinhliziyo kwezinhloko zamaviyo Bavarian, edolobheni baba ingxenye eBavaria. ezikhangayo eziningi Memmingen kube yisikhumbuzo izenzakalo ezihlukahlukene zomlando nangenkathi. Ingxenye izakhiwo mlando abhidlizwa ngesikhathi ngamabhomu kweMpi Yezwe II, izakhiwo ezibalulekile kakhulu abangu kabusha.
Ukuze usuku kuyiwe Munich, izivakashi ngokuvamile khetha Memmingen. Yini ukubona kuleli dolobha? Zonke ezikhangayo basuke bagxila Altstadt (Old Town). Ukuhamba azungeze umuzi, udinga ukuba banake ezikhangayo esemqoka, okuzoxoxwa ngezansi. Futhi kuwufanele look at the imidwebo ezindlini ezigcinwa lapha kusukela eNkathini Ephakathi. Qiniseka ukuthi ukuhamba ngomfula, okuyinto lizungezwe izindlu lovely Bavarian, ukuthola ikhaya lapho wayeka umlawuli Alexander Suvorov kanye Russian uMbusi u-Alexander I, kanye ekhemisi endala "Unicorn" e 1489 kanye zaveza isakhiwo ayengaphansi Customs ngasekupheleni kwekhulu le-15.
lekubukana nemfundzi ngamunye, inhlangano ka Abeluki endlini - sezakhiwo ezinhle kunazo isigamu-izingodo lomuzi - nendlu Fugger ngasekupheleni kwekhulu le-16.
Leli dolobha esenzelwe ukuhamba, kubalulekile kutsi ahambe Maximilianstrasse, Herenshtrasse bese ufaka indawo Iwayini emakethe nokusanhlamvu emakethe, bheka emthonjeni umdobi futhi umkhankaso okuphelele kungaba kwelinye zokudlela eyiqiniso noma kwi-Market Square, lapho ngesonto kabili ukusebenza imikhiqizo yasemapulazini fair.
Indlu enophahla eziyisikhombisa
The izinto ezibaluleke kakhulu Memmingen ezihlobene Ephakathi. Ubuningi usawoti, isici esibalulekile ebhizinisini lesikhumba Ephakathi kwaholela eqinisweni ukuthi umuzi inikeza ezihlukahlukene izikebhe workshop for ukushuka izikhumba uboya. Ukuze omiswe uboya kanye nesakhiwo engavamile Yakhiwa eshisayo amaningi ophahleni. Indlu wethiwa behlonipha design yayo eqondile, okuyinto ifana ophahleni ezine-tiered ne amawindi, ukudala okusalungiswa kunesidingo.
Lesi sakhiwo Kwakhiwa ngekhulu le-15 ku-izisekelo zendlu lasendulo. Lapho izikebhe lesikhumba aqala ukuncipha, indlu enophahla eziyisikhombisa sashintshwa saba ehhotela. Phakathi nesikhathi sokuqhuma kwamabhomu ngesikhathi ibhilidi Second neMpi Yezwe yabhidlika kabana, kodwa ngemuva kokuphela ubutha Swabians ezikhuthele ngokushesha abuyiselwe endlini, futhi zazama ukumbamba ukuba usebenzise ngangokunokwenzeka izinto zokuqala.
Kuzo zonke emizini Europe House, esihlalweni ukuphathwa isiphetho lasendulo, ingenye sezakhiwo ezinhle kakhulu, iyathinteka futhi Memmingen. EHholo LeDolobha emzaneni Swabian wakhela ngasekupheleni kwekhulu le-16, kodwa ukubonakala kwawo wuletheni ozuza kuphela 1765. Kuyinto sakhiwo esihle isitayela Rococo, uBarnaba noSawulu onion Dome futhi manje City. Kuyinto isakhiwo enhle emhlophe, uBarnaba noSawulu amafasitela bay nemibhoshongo ezintathu, ehlotshiswe stucco nenhle, organically ihlanganisa imfashini kanye izakhi isitayela French Traditional ngalé German we gable.
St kukaMartin Lutheran Church
Brutal isakhiwo itshe phezu Herenshtrasse emgwaqweni - lokhu ingenye izikhungo yenkolo emidala esifundeni. Church of St Martin e isitayela Gothic ezinzima yakhiwa kuleli ngasekupheleni kwekhulu le-15 esizeni i sonto ubudala Romanesque. imitha 65-imibhoshongo ephakeme isonto elithile, futhi namuhla uhlala isakhiwo kunazo zonke e-edolobheni. On the olungaphambili lwesonto isonto ungabona ubuso edwetshwe iwashi, wenza ukuthi phakathi nekhulu le-16. The elingaphakathi lombhishobhi lihlotshiswe umbukwane egumbini inkanyezi-ribbed akudala futhi original emawindini engilazi apendiwe, kukhona ehlukile kokuzihlanganisa choir Antique ne-altare, efana nomchilo Gothic. Ekhulwini le-17 umbhoshongo superstructure Dome olubheka neorganichno esakhiweni mlando iye yamisa. Sesonto, namasevisi namuhla aphethwe. Umbhoshongo ungakwazi ukugibela ukuba abone umuzi besuka endaweni ephakeme.
Ubuke Memmingen, abakwazi kalula iphawule Sigodlo ekhatsi isitayela ngasekupheleni Baroque, okuyinto ngesizotha kufihlwe emthunzini sesonto. Herman isigodlo lakhiwa ngo-1766 futhi wakhonza njengephayona ekhaya ukuze umthengisi ocebile Swabian. Kwaba kule ndlu bavimba yonke abantu abanethonya futhi wakuthola edabula Memmingen, kuhlanganise Russian uMbusi u-Alexander. Ngaphakathi isakhiwo kuyagcinwa Interiors omangalisayo kwekhulu le-18. Namuhla, esigodlweni kuyinto Museum yomlando wendawo, lapho ungafunda khona mayelana esidlule esikhazimulayo waleli dolobha lasendulo.
Kusukela ezinsukwini boom in usawoti Kwakuhileleke umsebenzi omkhulu usawoti ishede. Ubude bayo amamitha 100, okuyinto ukhuluma ngokucacile mayelana amavolumu ukuhweba kwalo mkhiqizo ezibalulekile. Kwathengwa isakhiwo esiyisitezi elula nge olungaphambili lwesonto ezimise lakhiwa iminyaka engamashumi amane 1470-1474. Namuhla, lapha kukhona zokudlela nezitolo.
Njengoba Ephakathi e Memmingen walondoloza izindonga zomuzi, okuyinto kanye evikelwe abakhileyo ezitheni. Zazakhiwe kusuka 11 kuya ekhulwini le-13. Namuhla, yalondolozwa kuphela ingxenye nezivikelo namasango eziningana. Amasango enhle kakhulu kukhona Western, okuyinto lakhiwa kabutjha 1648, futhi Kemptenskie esangweni nge imibhoshongo ephakeme izitini elakhiwa ngo 1383.
Memmingen Airport itholakala 5 ukusuka enkabeni yedolobha, elula kakhulu yohambo uhambo. Ngo lindiza, ungavele sibheke lokhu edolobheni, babe kwasemini endaweni yokudlela, ukuya Museum. Kusukela sezindiza eya ibhasi edolobheni ihamba njalo ihora, kodwa izivakashi ngokuvamile ukuhamba ngezinyawo, ekuthandeni endleleni yendabuko imvelo Bavarian. Memmingen zonke ezinhle izivakashi, kodwa unamandla ethile enkulu - it has amahhotela ambalwa, ikakhulukazi maphakathi kanye ukonga intengo izigaba. Nokho, izivakashi eziningi beze lapha esuka kwezinye izindawo, ezifana e Munich. Kusukela enhloko-dolobha Bavarian ukuze Memmingen is Kuhanjwa isitimela, eshiwo ngokucacile iwukuba ihora, isitimela lesifunda - 1 ihora nemizuzu engu-45. Kohambo lapha osebenza ithikithi Bavarian, kanye ithikithi ihlanganiswe ka nojantshi Austria.
Lihlanzekile leli dolobha futhi ilula kakhulu futhi kulula ukuyisebenzisa. Right kusuka esiteshini kuqala Old Town, lapho ezindaweni eziningi zikhona amabhentshi izivakashi ukuzulazula amabalazwe, futhi eduze ezikhangayo esemqoka kukhona izimpawu. Ulwazi izivakashi isikhungo, okuyinto isendaweni Town Hall Square, ungakwazi ukubuza noma imuphi umbuzo kanye nabasebenzi ukuthatha ibalazwe idolobha.
Inhlokodolobha enhle yase-Ukraine: i Ngohlelo ka zasendulo nezanamuhla
Amanzi eMoscow epaki "Aqua-Yun": izithombe, amanani kanye nokubuyekezwa
Izikhangibavakashi Lake Teletskoye, e-Altai
Club "Cabaret" Petersburg: incazelo, imibukiso, ukubuyekezwa
State Reserve Upper taz
Umshini wokuwasha izitsha Dome: yini, kanjani futhi kungani
Indlela chaza gelatin: Amathiphu ekulungiseleleni kophudingi, uzamcolo, Brawn
Indlela ukushintsha ukulungiswa yezithombe: izindlela nokulaywa
Kwamakhorali - lokhu ... Coral Okuyimvelo: ukucinga indikimba yendaba, intengo
Isikripthi sokuqala sonyaka wesifazane wesigubhu
Exhaust Inhlama: indlela yokukwenza? Zogwadule kusukela test qeda. Exhaust inhlama strudel: iresiphi ngesithombe
Edlala Clash of kwamaqembu ku TX 4: semininingwane ukuqondanisa
Indlela yokwenza umcibisholo ibhulukwe: incazelo, iziqondiso kanye inhlanganisela umhlabeleli
Amanyuvesi non-state eMoscow kwesikhathi sogunyazo